Tafihan’ny mpitolona mitam-piadiana ny Shiita ary mpanao gazety Afgàna maro hafa namoy ny ainy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2018 12:03 GMT
Ny tananan'i Kabul avy amin'i Masoud Akbari. CC 3.0.
Nanasongadina ny toe-java-tsarotra atrehin'ireo vondrona roa voarahona indrindra ao Afghanistan ny fanaovana vy very ny aina roa sosona vao haingana izay nahafatesana olona roapolo teo ho eo teo akaikin'ny toeram-panaovana fanatanjahantena iray tao Dasht-e-Barchi tanàna itatr'i Kabul : ny mpanao gazety sy ny Miozolomana Shiita ireo vondron'olona lasibatra ireo.
Anisan'ny faritr'i Kabul ahitana Shiita betsaka ao Dasht-e-Barchi. Nikendry ireo vahoaka marobe nivory teo ivelan'ny klioban'ny mpanao tolona ny fipoahana baomba voalohany tamin'ny 5 Septambra. Nilaza ireo vavolombelona fa namono ilay mpiambin'ny klioba aloha ilay mpanao vy very ny ainy vao nanapoaka ny baomba. Nitondra fiara feno baomba tao amin'ilay faritra izay nivorian'ny polisy sy ny mpanao gazety ilay mpanao vy very ny ainy faharoa .
Anisan'ireo maty tamin'ny fipoahana faharoa ny mpitati-baovao sy mpaka sary avy ao amin'ny Tolonews, sangany amin'ireo mpitati-baovao tsy miankina ao amin'ny firenena.
He was live moments ago on tv without knowing he himself will be making the headlines moments later. RIP dear friend ?? condolences @TOLOnews pic.twitter.com/klpSUud5Ix
Mbola nivantana tao amin'ny fahitalavitra izy fotoana fohy izay ary tsy nahalala fa izy tenany mihitsy no ho lohatenim-baovao aty aoriana. Mandria am-piadanana ry namana. Maneho ny fiaraha-miory.
Ry fianakaviana @saadmohseni @LNajafizada sy ny @TOLOnews. Miara-miory aminareo izahay ary midera ny herintsainareo sy ny herinareo. Anisan'ireo olona miavaka ao Afghanistan ianareo. Nitondra tsiky sy fifaliana ho an'ireo olona an-tapitrisany ianareo ary mbola manohy izany hatrany. Mijoro toy ny andry roa hafa amin'ny tantara hireharehanareo ireo maherifo lavo ireo.
Midika ny fahafatesan'izy ireo fa farafahakeliny mpanao gazety miisa iraikambinifolo no namoy ny ainy tamin'ny fanaovana vy very ny aina hatramin'ny fiandohan'ny taona. Tamin'ny 30 Aprily, mpanao gazety miisa sivy no maty nandritra ny fanafihana tany afovoan-tanànan'i Kabul.
Mbola ao anatin'ny hatairana hatrany noho ny fanafihana mampihoron-koditra iray hafa tamin'ny volana lasa teo ny distrikan'i Dasht-e-Barchi raha namono ireo mpianatra efa ho 50 izay nanomam-panadinana hidirana any amin'ny oniversite ny mpanao vy very ny ainy .
Voalaza fa ny ISIS no nanao ireo fanafihana roa ireo, izay mihevitra ny Miozolomana avy amin'ny rantsan'i Shia ho mpanitsakitsaka fomban-drazana.
Nanameloka ilay fanafihana ho heloka bevava mamely ny maha-olona ny Afghanistan Arg (sampan-draharaham-pitantanan'ny filoham-pirenena).
Ny voamarika indrindra moa dia ny namoahan'ny Taliban fanamelohana ihany koa tamin'ity fanafihana ity sy ireo fanafihana ny sivily tamin'ny ankapobeny fotoana fohy taorian'ny fipoahana baomba roa sosona.
Raha toa ka nikendry ny Shiita avy amin'ny Hazara vitsy an'isa teo aloha ireo vondrona mitam-piadiana, dia toa hita fa efa nihemotra tamin'ny sektarisma izy ireo raha nitolona ho amin'ny fitandroana ny fahefany tamin'ireo mpiady taminy, izay nirona nifindra nankany amin'ny vondrona mpikatroka hafa.
Tamin'ny taona 2015 ohatra dia nitatitra ny Reuters fa navitrika tamin'ny fiezahana hifandray tamin'ny taliban ireo zokiolon'ny Hazara mba hiaro azy ireo manoloana ny ISIS, izay voalaza fa nihanahazo hery tamin'ny fahatongavan'ireo vahiny mpiady nifindra toerana noho ny fifandonana tao Syria.
Nanamarika ny masoivohom-baovao fa tena mahagaga sy tsy fandre ity zava-misy ity satria nandritra ny fotoana nanjakan'ny Taliban, dia nataon'ny Taliban vonomoka ny Hazaras .